Naịjirịa kwụsịtụrụ ngagharị niile gụnyere ụgbọelu ụgbọelu nke onwe
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Naịjirịa kwụsịtụrụ ngagharị niile gụnyere ụgbọelu ụgbọelu nke onwe
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Safety • Tourism • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nigeria bụ ezigbo ahịa maka mgbazinye ụgbọelu nke onwe, mana nke a mechara kwụsị kpamkpam. E nwere ije na Naịjirịa ọzọ mgbe Onyeisiala Muhammadu Buhari kwụsịtụrụ ngagharị nke ụgbọelu nzuzo niile na ụgbọ elu ndị njem na Nigeria na Sọnde.
Nakwa, dị ka akụkụ nke gọọmentị iji gbochie mgbasa nke COVID-19 gafee Nigeria, Onye isi oche nyere iwu ka a kwụsị Lagos na Ogun steeti. E nyekwara iwu ahụ iwu ka Federal Capital Territory, Abuja.
N'ịgwa ndị Naijiria okwu, Onye isi ala kwuru, “Dabere na ndụmọdụ nke Federal Ministry of Health na NCDC, m na-eduzi nkwụsị nke mmegharị niile na Lagos na FCT maka oge mbụ nke ụbọchị 14 na-amalite site na 11 pm na Monday, 30th March 2020.
Ọ gwara ụmụ amaala niile nọ na mpaghara ndị a ka ha nọrọ n'ụlọ ha, na-agbakwụnye na a ga-eyigharị njem ma ọ bụ site na steeti ndị ọzọ. Azụmahịa na ọfịs niile dị n'etiti ọnọdụ ndị a kwesịrị imechi kpamkpam n'oge a.